Mitantana mpizara OpenVZ (III) | Avy amin'ny Linux
Salama indray, daholo. Anio dia hanohy ireo lahatsoratra andian-dahatsoratra momba ny fitantanana ny OpenVZ. amin'ny lahatsoratra teo aloha manarona izay rehetra mifandraika aminay izahay fametrahana avy amin'i OpenVZ.
Ka raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia tokony efa manana ny mpizara antsika OpenVZ napetraka ary vonona ny hiasa miaraka aminy.
Androany dia hiresaka momba ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fitantanana ny fitoeran, na ny famoronana azy na ny fikirakirana sy ny fitantanana azy.
1 Mamorona kaontenera
2 Fanamboarana fitoeran-javatra
3 Fitantanana ny kaontenera
ny fitoeran o EVs Izy ireo dia tontolo iainana virtoaly (milina virtoaly) izay haorinay sy hotantananay amin'ny mpizara anay OpenVZ. Mba hamoronana azy ireo dia mila manana maodely isika.
ny môdely izy ireo no maodely izay hananganana ilay kaontenera. Izy ireo dia mirakitra ireo fonosana samihafa ilaina amin'ny fiasan'ny rafitra sy ny fampiharana fototra sasantsasany, ary koa ny metadata (cache template) hananganana sy hanamboarana ny masinina.
Misy maodely samy hafa fizarana de Linux. Ny sasany amin'izy ireo dia voatazona amin'ny fomba ofisialy ary ny sasany kosa dia fandraisana anjara avy amin'ny fiarahamonina.
Ny fomba tsotra indrindra hahazoana azy ireo dia ny fampiasana ny iray amin'ireo modely efa noforonina mialoha. Ireo dia azo tamin'ny famoronana kaontenera avy amina modely ary avy eo fonosina ao anaty rakitra gzip.
Ireo rakitra voageja ireo no ho ampidinintsika ary avy amin'izany no hamoronana kaonteneranay manokana. Amin'izany fomba izany ny famoronana ireo kaontenera dia haingana kokoa sy mora kokoa noho ny tamin'ny lasa, raha ny cache dia tsy maintsy novokarin-tanana. Ny sisa ataonao anio dia ny misintona ny fisie fizarana nofidinao avy amin'ity pejy ity:
Vantany vao alaina, dia tahirizintsika izy io satria ato amin'ity lahatahiry an'ny mpizara ity:
Afaka mamorona ny fitoeran avy amin'ireo modely napetraka. Ny zavatra voalohany tokony hotadidina dia ny kaontenera tsirairay dia manana id isa mifandraika aminy izay manondro ny famantarana ny VE ary tsy azo averina ao anatin'ny mpampiantrano ara-batana iray ihany izy io.
Ary koa, ny ID dia tsy maintsy lehibe kokoa noho ny 100, satria ID avy amin'ny 0 ka hatramin'ny 100 no ampiasain'ny rafitra.
Ny fitantanana kaontenera dia ny baiko manandanja indrindra vzctl. Ity syntax manaraka ity dia ampiasaina hamoronana fitoeran-javatra vaovao:
Ao amin'ny ostemplate dia apetratsika ny anaran'ilay modely izay nalainay teo aloha. Tsy voatery ny masontsivana config. Ao no hametrahanao ny anaran'ny fisie miaraka amina fika efa voafaritra mialoha ho an'ireo kaontenera.
Raha tsy mamaritra azy manokana isika dia tsy maintsy ataontsika amin'ny tanana. Ny fisie fikirakirana dia hita ao:
Ireo firaketana ireo dia manana an'ity firafitra ity:
Ny mahazatra indrindra dia basic (ve-basic.conf-ohatra). Azontsika atao ny mampiasa ireo noforonina namboarina na nanao ny antsika. Na ahoana na ahoana, ny sanda rehetra voafaritra dia azo ovaina aorina.
Ohatra, mba hamoronana kaontenera misy ID 101, avy amin'ny môdely debian izay navoakanay taloha ary mampiasa ny fanahafana fototra, dia manatanteraka izahay:
Ankehitriny rehefa namorona ny kaonteneranay izahay dia afaka miroso amin'ny fandefasana azy. Amin'ity no ampiasainay ny syntax manaraka:
Betsaka ny masontsivana ahafahantsika manamboatra. Mba hijerena azy ireo dia afaka mankany amin'ny boky torolàlana vzctl isika rehetra (#man vzctl) na to wiki openvz.
Mba hahafahantsika manova ny fanovana izay ataontsika, dia mitoetra izy ireo aorian'ny fanidiana ny rafitra, mila manampy –ary mitsitsy isika amin'ny faran'ny baiko. Raha tsy izany dia haharitra mandra-pikatona manaraka ihany.
Eto izahay dia hanazava ny sasany amin'ireo baiko fototra indrindra:
Amboary ny kaontenera mba hanombohana rehefa manomboka na tsia ny solosaina.
Lazao ny anaran'ny mpampiantrano an'ny solosaina
Manampia adiresy IP amin'ilay fitaovana. Izy ireo dia ampiarahana miangona.
Raha te hamafa ireo efa namboarina teo aloha isika dia tsy maintsy ampiasaintsika:
Ampifanaraho ny adiresin'ireo mpizara DNS. Azonao atao ny mampiasa an'io safidy io imbetsaka amin'ny baiko mitovy handefasana mpizara maromaro. Ny fanatanterahana izany dia hanadino ireo nameservers efa namboarina teo aloha.
Apetraho ny mpampiasa tenimiafina. Raha tsy misy dia mamorona azy. Manoro hevitra anao ny tsy hampiasa an'io masontsivana io miaraka amin'ny hafa. Tsy mila ampiasaina save miaraka amin'ity masontsivana ity.
Manondro ny filaharana hanombohan'ny milina amin'ny fanombohana. Arakaraka ny maha avo ny isa no hametrahana ny laharam-pahamehana. Raha tsy voalamina dia heverina ho manana ny laharam-pahamehana indrindra ary ny kaontenera hafa izay namboarina dia hanomboka aloha.
Farany, avelako ianao ohatra iray ohatra ny fanatanterahana fikirakira fototra ho an'ny container 101
#vzctl set 101 --onboot eny --hostname virtualhost --ipadd 192.168.1.10 --nameserver 8.8.8.8 --nameserver 4.4.4.4 --hafao #vzctl set 101 --userpasswd root: 1234
Fitantanana ny kaontenera
Raha vantany vao noforonina sy namboarina ireo kaonteneranay dia afaka tantintsika izy ireo. Mba hanaovana izany, hampiasa ny baiko vzctl indray izahay. Ny sasany amin'ireo baiko fototra momba ny fitantanana kaontenera dia voatanisa etsy ambany:
Atombohy ilay kaontenera
Atsaharo ny kaontenera
Atsaharo ny kaontenera nefa tsy miandry ny fijanonan'ny fizotrany rehetra
Izy io dia milaza amintsika ny toetran'ny kaontenera
Aringano ilay kaontenera. Alohan'ny ilaina dia ny nanakana azy.
Mampiditra ny masinina amin'ny alàlan'ny tsipika baiko ianao toy ny hoe niditra tamin'ny ssh izahay.
Mandehana baiko ao anaty kaontenera.
Tanisao ireo kaontenera miasa ao amin'ny mpizara. Miaraka amin'ny safidy iray - tanisao ihany koa ireo voasambotra.
Izay ihany no natao androany. Amin'izany dia vitantsika ny ampahany ifotony indrindra amin'ny fitantanana ny OpenVZ.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka momba ny fomba mandroso kokoa isika, toy ny fitantanana loharanom-bola, ny fampisehoana backups na ny fampiasana ny ploop.
Mandra-pahatongan'izany dia azonao atao ny manandrana izay rehetra nohazavainay hatreto. Toy ny mahazatra, avelao ny fanontaniana apetrakao ao amin'ireo hevitra ary hahita anao tsy ho ela. Ho ela velona sy fanambinana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Mitantana mpizara OpenVZ (III)
Lahatsoratra tena tsara !! 😉
Kamisama666 dia hoy izy:
Misaotra betsaka!. Faly be aho fa afaka namoaka ireo lahatsoratra ireo. Hanohy hiasa mafy aho ary hiara-hiasa amin'izay azoko atao. Ho ela velona sy fanambinana.
Valiny tamin'i Kamisama666
ocz dia hoy izy:
Lahatsoratra tena mahaliana momba ny OpenVZ. Andao hojerentsika raha mamporisika ahy hanandrana ianao, efa ela aho no nijery an'io. Eto aho mamela hevitra vitsivitsy:
Tsy fantatro mihitsy ny fomba fiasan'ny OpenVZ, ary ny iray amin'ireo fanontaniana lehibe ananako dia ny antony ilana mametraka ny fikirakirana tambajotra amin'ny tanana ho an'ny masinina tsirairay. Tsy avelanao haka izany amin'ny mpizara DHCP? Izany hoe, azo atao ve ny manome tetezana MAC + avy eo mitantana ny tenany ireo masinina hahazoana ny fikirakirana tambajotra? (Satria ao amin'ireo lahatsoratra momba ny OpenVZ izay nahafahako namaky azy dia ampiarahina amin'ny IPv4 foana, fa ahoana kosa ny IPv6?)
Inona koa, raha toa ka tsy maintsy apetrakao amin'ny statically ny fikirakirana ny tambajotra, inona no tsy mety amin'ny fanaovako azy amin'ny "ao anaty" ny masinina? Ary inona izany mba hanomezana hostname avy amin'ny mpampiantrano? Raha fintinina dia toa tsy misy dikany sy be loatra amiko io, ary tiako ho fantatra ny antony ilana na anolorana azy.
Etsy andanin'izany, tsy haiko raha hikasika an'io lohahevitra io ianao, saingy liana amin'ny lahatsoratra iray momba ny filaminana sy ny fiainana manokana amin'ny fampiasana OpenVZ aho. Ao amin'ny VirtualBox dia zatra tsy "mifankahita" na miaraka amin'ny mpampiantrano aho, raha tsy hoe te-hampiasa tamba-jotra na lahatahiry zaraina aho. Manontany tena aho, ohatra, hoe inona no atahorana hanangana honeypot miaraka amin'ny OpenVZ. Heveriko ho hevitra izany raha sanatria ka manoratra momba izany ianao.
Faly be aho fa tianao ny lahatsoratra ary mamporisika anao aho hanandrana ny OpenVZ. Ho hitanao fa mora ny mitantana azy.
Mikasika ny fisalasalanao, ny ankamaroan'izy ireo dia misy ifandraisany amin'ireo zavatra mbola tsy noresahintsika. Fa hanome fampidirana kely anao aho hamahana azy ireo.
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ao amin'ny OpenVZ dia misy karazany roa ny fikirakira ho an'ny tamba-jotra. Venet na veth azo ampiasaina. Ny voalohany dia mitovy amin'ny tambajotra tsy miankina, izany hoe tsy azo idirana afa-tsy amin'ny kaontenera sy ny mpampiantrano ara-batana. Eo imason'ny masinina hafa amin'ny tambajotra dia toy ny hoe tsy misy izy ireo. Etsy ankilany, ny veth dia karatra tambajotra virtoaly izay mahatonga ny kaontenera hiasa toy ny solosaina hafa amin'ny tambajotra ary azon'ny milina hafa idirana. Izy io koa dia mamela safidy mandroso kokoa toy ny fampiasana DHCP na ny fikirakirana tambajotra avy ao anaty kaontenera.
Mikasika ny IPv6, samy manohana azy ireo fomba roa ireo. Azonao atao ny mampiasa ny baiko ipadd amin'ny adiresy ipv6 tsy misy olana. Mazava ho azy, amin'ny venet dia tsy mandeha avokoa ny endri-javatra rehetra. Satria tsy manana MAC mifandray aminy ny carte venet, tsy mandeha ny zavatra toa ny fahitana mpifanolo-bodirindrina na dokam-barotra amin'ny router.
Mikasika ny zava-misy fa tsy maintsy ampiendrehinao ivelany ireo toetra, raha ny fahitako azy dia fomba iray hanamorana ny asan'ny mpitantana izany. Io dia ahafahanao manova ireo toetra mora foana ary afaka manamboatra azy saika tsy misy ezaka. Ary, araka ny nolazaiko tao amin'ny lahatsoratra, azonao atao ny mamorona modely fanamboarana anao manokana hamoronana ireo milina, ka manala aretin'andoha maro.
Farany, momba ny fiarovana, ny fampiasana OpenVZ ho an'ny famoronana honeypot dia tena soso-kevitra. Manakatona tanteraka kaontenera amin'ny rafitra ara-batana i OpenVZ ary miseho ho tena an'ilay mpanafika. Ary izany rehetra izany dia amin'ny fanjifana loharanon-karena ambany dia ambany. Safidy tsara hananganana honeypots (na dia misy safidy tsotra sy mifantoka manokana aza).
Manantena aho fa voavaha ny fisalasalanao. Raha manana lohahevitra hafa na tianao tianao horesahiko aho dia aza misalasala milaza izany. Mandra-pihaona. Ho ela velona sy fanambinana.
Salama, ity andian-dahatsoratra ity dia tena tsara, te-hijery ireto manaraka ireto aho: manandrana mamerina amin'ny laoniny ny backup sasany amin'ireo kaontenera OpenVZ (fisie .tar sasany) izay mandeha amin'ny mpampiantrano miaraka amin'ny Ubuntu Server, vita ireto manaraka ireto baiko:
vzdump –suspend ID –mailto root –dumpdir / backups / fisie
Ity mpampiantrano ity dia manana an'ity manaraka ity: vzctl kinova 3.0.22
Ankehitriny ny hevitra dia ny ahafahana mamerina ireo kaontenera ireo amin'ny mpizara CentOS 6. Rehefa mamorona VM vaovao aho dia tsy manana olana, saingy tsy mahita fomba hamerenana ireo backup ireo aho (amin'ny CentOS dia manana an'ity kinova manaraka ity aho: vzctl version 4.7.2)
Ary mazava ho azy fa lahatsoratra ity 😉 😀
Raha ny fahitako ny ankamaroan'izy ireo miresaka momba ny fampiasana vzrestore, na vzdump –restore, saingy tsy azoko atao ny miasa. (Ao amin'ny CentOS 6 dia tsy manana vzrestore aho na koa ilay sainam-pirenena any vzdump) Azo antoka fa nisy zavatra nandositra ahy noho ny tsy fahampian'ny traikefa momba ilay lohahevitra
Ity misy fanontaniana:
Azo atao ve ny manao izay tiako? Misy vato misakana ve?
Inona no fomba hanaovana azy? Tokony hametraka vzrestore ihany ve aho?
Misaotra tamin'ny fandraisana anjara, arahaba
Salama, misaotra tamin'ny hevitrao.
Mikasika ny fanontanianao, amin'ny ankapobeny dia tsy tokony hisy olana. Raha ny marina dia tadidiko fa efa nahita an'io aho taloha be ary namaha izany aho tamin'izany. Saingy amin'izao fotoana izao dia tsy afaka miditra amin'ireo antontan-taratasy nataoko ho ahy aho ary, satria tsy nikasi-tanana azy io efa ela aho dia tsy tadidiko. Aza kivy anefa fa hametraka milina miaraka amin'ny OpenVZ afaka kelikely aho ary hamaha azy vetivety. Ary noho izany, angamba hiverina any amin'ity andiana lahatsoratra ity aho, izay nilaozako kely.
Ho ela velona sy fanambinana.
Misaotra ny valin-teninao, tena tiako izany raha hitanao izany.
(Ankoatr'izay, ireo lahatsoratra vaovao izay mety hivoaka momba io lohahevitra io dia azo antoka fa tena ilaina)
Ny iray amin'ireo zavatra mahasarika ny saiko dia ao amin'ny CentOS 6.5 apetrako ireo dia ireo fitaovana apetrany:
vzcalc, vzcptcheck, vzctl, vzdqdump, vzeventd, vzifup-post, vzmemcheck, vznetaddbr, vzoversell, vzquota, vzstats, vzubc, vzcfgvalidate, vzcpucheck, vzdqqcheck, vzmigqqqqqq
Amin'ny fanarahana ireo dingana ao amin'ny antontan-taratasy ofisialy: https://openvz.org/Quick_Installation_CentOS_6
Ary amin'ireo sainam-pirenena hitako tamin'ilay lehilahy vzdqdump dia tsy manana sainam-pirenena aho. Hitako ihany koa fa ao amin'ilay lehilahy vzctl dia misy sainako –snapshot * fa tsy haiko raha izany no tadiaviko na ahoana no hampiasana azy ireo.
Eny, rehefa avy niady tamin'ny openvz sy ny fahamaimaizan'ireo tahirin-kevitra nataony aho dia heveriko fa fantatro ihany izany tamin'ny farany. Tena mila mampiasa vzrestore ianao izay tonga miaraka amina vzdump. Saingy ao amin'ny CentOS dia tsy apetraka izy ireo ary tsy maintsy ataonao amin'ny tanana. Somary nifanodin-doha ny fizotrany (ampy fotsiny ny manentsina ny lohanao amin'ny fitendry) ka nanatsara lahatsoratra iray tao amin'ny bilaogiko nosokafako vao tsy ela akory izay.
ny url dia: https://kamisama666.github.io/2014/07/instalacion-vzdump-centos6/
Manantena aho fa nanampy ahy ianao, holazainao amiko ny fandehany. Oh, ary satria manontany ianao, ny safidy "snapshot" dia tsy mandeha afa-tsy amin'ny fitoeram-ploop karazana, izay endrika fitehirizana hafa noho ny mahazatra ao amin'ny openvz. Ny mahaliana kokoa dia ny "fampiatoana" sy ny "famerenana amin'ny laoniny", izay afaka mamonjy ny fipetraky ny kaontenera iray ary hamerina azy io any aoriana (saingy tsia, tsy mifanaraka amin'ny vzdump). Na izany na tsy izany, andao hojerentsika raha hamerina ny lahatsoratra aho ary hiresaka momba ireo zavatra ireo.
Tsy fantatrao izay tiako hankasitrahana an'io lahatsoratra io. Amin'ny Alatsinainy dia andramako izany ary holazaiko aminao, manantena aho fa hamerina andian-dahatsoratra vaovao momba io lohahevitra io ianao. Ary mazava ho azy hizara ny hafatrao aho fa azo antoka fa misy olon-kafa mahatsapa fa mahasoa 😉 Holazaiko anao ny fandehany tamin'ny Alatsinainy, arahaba.
Faly aho fa nanampy anao izany. Raha ny marina, hatramin'ny nahavitako ny lahatsoratra dia nanararaotra aho ary namoaka azy tao amin'ny desdelinux mba hahitan'ny olona maro azy. Hitanao eto izany:
Ho ela velona sy fanambinana
jcrisdro dia hoy izy:
Ry namako, manana olana aho aorian'ny fanarahana ny dingana fanaingoana, ny fanontaniana dia hoe avy amin'ilay masinina anaovako ny VM vaovao no ahitako azy, fa avy amin'ny ampahan'ny tambajotra dia tsy izany, ohatra:
Manana fizarana 1. * aho, ny mpampiantrano A ahy dia manana 1.50 ary ny VM B vaovao dia manana 1.201, avy amin'ny masinina A dia afaka mahita B aho, fa tsy avy amin'ny solosaina hafa mifandray amin'ny tambajotra iray ihany.
Azonao atao ny manazava ahy amin'ny zavatra tsy ataoko
Mamaly an'i jcrisdro
Lahatsoratra tena tsara ary nanampy ahy be dia be izany, ankehitriny ny fangatahana, manana kaontenera efa am-pamokarana miaraka amina modely debian-7 aho ary tiako havaozina amin'ny debian-8 io kaontenera io ihany, ahoana no hataoko?
Salama misaotra betsaka. Tapaka nandritra ny fotoana kelikely aho avy tao amin'ny OpenVZ fa hiezaka hanampy anao araka izay tratrako aho.
Voalohany indrindra dia holazaiko aminao fa, raha azo atao, dia mieritrereta hamorona fitoeran-javatra vaovao noho ny maodely Debian 8 ary hamindra tsikelikely ny angona sy ny fikirakirana avy amin'ilay fitoerany taloha mankany amin'ilay vaovao. Avy eo dia mila mametraka ny IP an'ny milina taloha amin'ny vaovao sy raikitra ianao. Io no fomba mora indrindra sy tsotra indrindra misy.
Etsy ankilany, raha tsy azo atao izany na inona na inona antony, amin'ny teôria dia azo atao ny manavao ny distro avy ao anaty fitoeram-bokatra toa ny nataonao tamin'ny milina Debian hafa. Saingy efa naheno tamin'ny olona nanana olana tamin'io aho, ka voalohany indrindra andramo amin'ny kaontenera hafa izany. Ary raha manana olana ianao eto dia misy tranokala roa miresaka momba ny famahana azy ireo (amin'ny teny Anglisy):
Diniho manokana ilay voalohany, izay no farany indrindra ary manazava ny zava-drehetra aminao tsikelikely izy io.
Mazava ho azy, alohan'ny hanaovana fanovana ny fitoeranao amin'ny famokarana, tsy ilaina ny ilazako aminao ny fanaovan-dronono ilay fitoeram-bokatra, mangatsiaka na mafana araka izay mahamety anao, raha sanatria misy tsy mety.
Manantena aho fa nanampy. Ho ela velona sy fanambinana.
Salama misaotra betsaka. Tapaka nandritra ny fotoana fohy aho tamin'ny OpenVZ saingy manantena aho fa afaka manampy anao.
Voalohany indrindra, raha tsy misy mahasakana anao dia mamporisika anao aho hamorona fitoeram-baovao miaraka amina modely Debian 8 ary hifindra toerana ao ny configurations, data ary rindrambaiko rehetra. Raha vao miasa ny zava-drehetra dia mila manova ny IP an'ny fitoeran-javatra taloha fotsiny ianao ary mametraka azy ao amin'ilay iray vaovao. Io no fomba mora indrindra sy haingana indrindra.
Raha misy antony tsy azonao atao izany, amin'ny teôria dia azo atao ny manavao ny fizarana avy ao anaty kaontenera mihitsy. Mila manao izany fotsiny ianao toy ny amin'ny milina Debian mahazatra. Saingy henoko tamin'ny olona nanana olana, na dia tsy tokony hitranga aza izany raha ataonao havaozina hatrany hatrany ny kernel fampiantranoana. Na izany na tsy izany, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny manandrama manavao miaraka amin'ny kaontenera iray hafa miaraka amin'ny debian 7 hahazoana antoka fa tsy manome olana izany. Ary raha mahita ianao dia ireto misy pejy miresaka momba ny fanamboarana azy (amin'ny teny anglisy):
Ny mahaliana indrindra dia ny voalohany, izay no farany indrindra ary manazava tsikelikely ny zava-drehetra.
Na izany aza, tsy mila milaza aminao aho fa, na inona na inona fanapahan-kevitrao, aza manao na inona na inona amin'ny fitoeran-javatra amin'ny famokarana raha tsy manao backup aloha, na mangatsiaka na mafana, raha sendra misy zavatra mitranga.
Manantena aho fa nanampy anao. Ho ela velona sy fanambinana
Misaotra namaly, tsara ny fanampiana, hovakiako ilay lahatsoratra ary hanao fitsapana roa ary avy eo holazaiko anao hoe iza amin'ireo no tsara indrindra, arahaba.
ramoncin dia hoy izy:
Salama tsara, manana lesoka amin'ireo boaty openvz aho ary tsy mahita lojika. Ny fahitana an'ity bilaogy ity miaraka amina ampahany amin'ny fanehoan-kevitra dia ataoko eto ny fangatahana sao misy afaka manampy ahy.
Nametraka openvz tsy misy olana aho ary namorona kaontenera tsy misy olana, nametraka serivisy tranonkala tsotra iray ao amin'izy ireo ary niditra.
Ny zava-misy dia rehefa manandrana manao fanavaozana ianao, ohatra: »fanavaozana apt-get» dia milaza amiko izy fa tsy misy ifandraisany amin'ireo ip an'ny trano fitehirizana izany ary tsy misintona na inona na inona, ka tsy afaka manavao na mametaka fonosana vaovao aho. Raha ataonao ping ireto ips ireto, misy zavatra tsy tadiaviko ve?
Mamaly an'i ramoncin
Ela aho vao namaly fa hitako ny vahaolana efa ela lasa izay ary tsy te hamela azy eny amin'ny habakabaka aho.
Ny olana dia ny tsy fahaizako loatra, matetika no loharanon'ny ankamaroan'ny olako, nanana nateo aho izay nanitsy ny zava-drehetra tonga tamin'ny seranan-tsambo 80 mankany amin'ny proxy avadika, rehefa nanao ilay fanavaozana azo apetraka, dia natombony izany fa ny valiny dia naterina tamin'io ekipa voalaza io, ny fametrahana ny iptables dia mamaha azy tsara ary mandeha tsara ny zava-drehetra, toy ny lojika.
Misaotra ny fidirana ao amin'ny OpenVZ, nanampy ahy handamina azy tsara io
PS: Fantatro fa ny fanavaozana dia atao amin'ny alàlan'ny port 80, nieritreritra aho fa hampiasa kisendrasendra avy amin'ny 1000 ...
Indray mandeha, Linus dia manome thumbs NVIDIA